2 Hablood Oo Laga Sii Daayey Xabsi Ku Yaal Somaliland Oo Warbaahinta Toronto U Waramay – Horn Cable Tv
0	May 13, 2019 6:45 am
India: 150 Caruur Ah Oo U Dhintay Khudrad Sumaysan
Dowladda Djibouti Oo Ka Hadashay Dibad-Baxyo Ka Dhacay Dalkaasi
Ottawa, (HCTV) – Laba hablood oo Canadian ah oo laga sii daayey xabsi ku yaala Somaliland ayaa warbaahinta u sheegay in loola dhaqmay badhqan aad u foolxun.
Labadan gabdhood ayaa la kala yidhaa Maymuuna Cabdi, oo 28 jir ah iyo Karima Watts oo 24 jir, oo bileyska Somaliland ay soo xidheen bishii January, balse markii dambe la sii daayey bishii April ee sanadkan 2019-ka.
Labada hablood ee Maymuuna Cabdi iyo Karima Watts ayaa markii hore ka yimid magaalada Ottawa ee dalka Canada, waxaanay maanta ka dageen garoonka diyaaradaha ee Toronto ee Pearson International Airport.
Ciidamada bileyska ee magaalada Hargeysa ayaa xidhay 19-kii January iyagoo ku eedaynaya inay cabeen khamri. Waxaana lagu riday xukun inkastoo la soo daayey 23-kii April ee sanadkan.
“Waxaan dareemayaa xornimo farabadan. Hubaashi waxay ahayd waxa na soo maray wax adag,” ayay u sheegtay Maymuuna Cabdi wariyeyaashii ku sugnaa madaarka wax yar ka dib markii ay dalkaasi Canada ay gaadheen, waxaanay intaasi ku dartay “Anigu aadbaan u daalanahay oo aan u walaacsanahay.”
Maymouna Cabdi ayaa rumaysan in lagu sii daayey kadib markii ay warbaahintu ay wax ka qoreen xadha foosha xun ee ay la kulmeen.
Waxaanay intaasi ku dartay in xafiiska qunsuliyada Canada ee halkaasi aanu u caawin iyaga sidii ay uga baahnaayeen.
Waxaana labadan gabdhood lagu xukumay laba bilood iyo badh oo xabsi ah. Waxaanu sheegay Qareen Mubaarik Maxamuud oo u doodayey hablahani in dacwad oogihii kiisku aanu maxkamada hor keenin wax cadayn ah oo sheegaya in habluhu ay khamri cabeen.
Waxaana warbixin diyaarsan oo ay akhriday Maymouna Cabdi ay ku sheegtay in dadku ay waydiinayeen sababta ay u tageen meel sidaas khatar u ah sida Somaliland oo kale. Waxanay sheegtay in ay u tageen labaduudu waajibaad saarnaa oo ahaa inay caawiyaan dumar gaboodfalo wajahayey.
Waxaanay Karima Watts iyo Maymouna Cabdi ay sheegeen inay la kulmeen dhibaatooyin iyo gaboodfao nafsi ahaanee oo ka soo gaadhay xabsiga, waxaanay tilmaantay in la duudsiiyey in dawo loo keeno, la talin sharci oo ay helaan iyo xataa funto iyo biyo inay helaan.
Shil Gaadhi Oo Ay Ku Dhinteen 14 Qof Oo Ka Dhacay Gaarisa -Kenya